Thalia Ukucwilisa - Umagazini Design
Ukucwilisa I-Washbasin ebukeka njenge-bud elungele ukuqhakaza futhi igcwalise: iqhakaza kangangokuba yenziwa njengenyunyana enamakhono e-larch eqinile ne-teak, isengxenyeni engaphezulu nenye engaphansi. Umeshi oqinile futhi ophephile, ohlinzeka ngokuphila okukhethekile kokuthinta nombala ngokuphila okuhlanganayo ngenhliziyo kokusanhlamvu okunama-hues ahlukene njalo akhiqiza izimbiza zokugeza ezihlukile. Ubuhle bale nto buphawulwa yi-asymmetry yayo nokuvumelana kwayo ngokuhlangana kwezimo ezahlukahlukene nobunjalo bezinkuni.
Igama lephrojekthi : Thalia, Igama labaklami : Edoardo Petri, Igama leklayenti : .
Lo mklamo omangalisayo uwina umklomelo womklamo wesiliva wemfashini, isembatho kanye nomncintiswano wokuklama izingubo.	Kufanele nakanjani ubone iphothifoliyo yomklamo wabadwebi besiliva abawine umklomelo ukuthola ezinye izinto eziningi ezintsha, ezintsha, zemfashini zangempela nezokudala, isembatho nemisebenzi yokwakha ingubo.
Ifenisha yokugezela kanye nomklamo we-sanitary ware
Ukucwilisa Edoardo Petri Thalia